Shirkaddaha Somtel Iyo Somcable Oo La Filaayo Inay Dhowaan Midoobaan .
Friday June 09, 2017 - 02:50:38 in Wararka by Halgan News
Hargeysa(Halgan)Shirkaddaha Dhinaca internet ka ee Somtel iyo Somcable ayaa la filayaa inay dhowaan midoobaan, iyaga oo ka midoobaaya dhinaca Internet ka oo ah shayga ugu weyn ee ay bixiyaan.
Wadahadalada ay shirkadaahaasi ku midoobi doonaan ayaa wararku sheegayaan inuu hadda socdo, iyada oo la filaayo inay dhowaan midobaan.
Wadahadaladan ayaa waxa soo wada yeeshay Mulkiilaha shirkadda Somcable Maxamed Aw Siciid iyo shirkadda Somtel oo iyadu ah laan kamid ah shirkadda Dahabshiil, iyaga oo ku heshiiyeye in labada shirkaddood noqdan isku hal shirkad.
Wararka ay warbaahintu helayso ayaa sheegaaya in ay ku heshiiyeen in shirkadda So Gasho ay yeelan doonto saami dhan 35%, halka ay shirkadda Somtel-na yeelan doonto saami dhan 65% kiiba, taas oo sababteedu tahay iyada oo ay shirkadda Somtel ka balaadhan tahay shirkadda So Gasho oo iyadu hadda ka shaqaysa qaybo magaalada Hargeysa kamid ah.
Labada shirkaddood ayaa markay heshiiskooda dhameeyaan, sidoo kalena ay midoobaan la bixi doona magac cusub oo ay ku heshiin doonaan, kaas oo aan ilaa hadda laysla qaadan.
Labadan shirkaddood ayaa loo malaynayaa inuu ku yimid kadib markii ay shirkadda Telesom xadhig Viber Optic ah soo dhigtay dhinaca gobolka Sool , kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi taagnaa .
Waxaana jira tartan adag oo u dhexeeya shirkaddaha dhinaca Internet ka ee Somaliland ka jira iyo kuwa taleefanada , iyada oo ay ku socdaan xawli weyn oo dhinaca horumarka internet ka ah , kaas oo ay bulshadu aad ugu baahan tahay .